Taariikhda My Butros » Waa Jacaylka Dogs : Xadhig New On Life
by Claire Shiil
Last updated: Oct. 21 2020 | 6 min akhri
Walaalkay Michael sii joogi ila ilaa uu guurka dib u helay on track.
“Ma aadan Molly coddle isaga, Sarah,” aabbahay ahaa wuxuu. “Just isaga u siiyaan saddex god oo maalin iyo hubi in uu leeyahay shaati starched cad inay xirtaan xafiiska.”
“Haddii uu sidaa u badan sida eegayaa dhalada biirka ah, uu telefoonka gacanta qarin,” walaashay Carol aan yiri. “Ha, xaalad kasta, ha ku sakhraamin garaac Phoebe. Waxay ahayd qumayo la caasimada B a marka uu aroosay, iyo waxa ay noqon doontaa qumayo la caasimada B ah marka aan helno iyada bedelka.”
“Waa maxay sababta Michael leeyihiin in gurigaaga joogo?” walaashay Christine aan yiri. “Badan oo qolka Waxaan leenahay, oo aanay jirin wax denbi, laakiin waa si aan cadaalad habka aad had iyo jeer si ay isaga dhaqda.”
Bilood ka dib, waxaa laga yaabaa sano, ee isku dayaya in ay u aamuso guur wada halka uu ku noolaa guriga, Michael rajaynayo in maqnaansho doonaynin, dhab ahaantii, sameeyaan Phoebe ee wadnaha koraan fonder. Sidaas uu ka soo dhaqaaqay iyo haatan wuu eryay gabdhihiisii, Annie iyo Lainie, in qoob tallaabo Irish Arbacada dugsiga ka dib oo ka soo bixin dabadeedna qaaday inay casho. Waxay kaloo isaga la qaatay isbuucaan kasta.
“Muddo intee le'eg ayaad u malaynaysaa in ay noqon doonto?” John Anderson ugu dambeyntii ka codsaday. Tani waxay u muuqatay su'aal macquul ah ka ninkii ii noqday muhiim ah oo kale.
“Ma ilaa Negeria jahannamada badan u muuqdaan kuwo aad u rajo xun?” Waxaan ugu jawaabay:.
Ka dib bilowga ku socoto si aannu xiriir, John iyo aan la wadaago lix bilood Naciimo shukaansi. Waxaan hadda ahaayeen asal ahaan la joojiyey. Mararka qaarkood waxaan ka yaabay dhexe ee habeenkii aan lahaa ayna mashaqo haddii dhibcood Naciimo ku filan si aad uga gudubto. Oo Naciimo leeyihiin nolosha shelf ah? Waxa uu dhacayo lahaa dayacaad ka hor inta aan kari karin taageere olol mar kale si joogto ah?
Caawa, ayaa walaalkay Michael oo aan dib u bilowday on sariirtaydii. Oo uu isbuucii A ee starched shaati cad in bacaha dhaqo ayaa ku gadaaman badan aan la tegaan. Laba dhalooyin qamri Sam Adams madhan oo uu dhinac fadhiyo kala bar-cunay pizza cheese ah miiska qaxwada. Waxaan ahaa walaashiis ah oo wanaagsan.
“Nice,” Michael yiri.
“Thanks,” Waxaan is-idhi.
In ka badan todobaadkan, Michael iyo Annie iyo Lainie oo aan hoos u soo jiidayaa jaranjaro aan dhoqosh jir istoodhka iyo martay ugaarsi ah ciyaaraha. Ubadkiina, ma ahaayeen haday aad la yaab leh ugu Mala'igtu of Carruurnimadeydii iyo dib u ahaayeen hoosta laga badiyay kulamada telefoonka gacanta ee waqti lahayn. Waxaa cad in walaalkay haddii kale dareemay, sababtoo ah hadda uu ku cayaarayay ay ii Koraaya caruusada Up Skipper.
“Waxay labada caruusadaha in mid ka mid, for fun laba jeer sida ugu badan!” Waxaan akhrin aan iska yeelyeel peppiest ee ganacsi 1970.
Skipper ahaa Barbie walaashiis yar. Sida ay Doublemint of our carruurnimada ayaa loo calaamadeeyey laba, laba, laba-abuurleeyda in mid ka mid, version of this Skipper dhab ahaantii waxay ahayd laba caruusadaha in mid ka mid. Marka ugu horraysa ee aad aragtay iyada, ayay u muuqatay in yar degay arday macaan dugsiga hoose. Laakiin haddii aad dib isku beddeli iyada gacanta bidix, ayay dhab koray laabta xaq indhahooda la hor.
Sida haddii Barbie ee jirka aan macquul aheyn uusan i xiri kor ku filan sano ee aan koboca. Thanks to Koraaya Up Skipper, Waxaan dhihi lahaa aan nolosha prepubescent qaatay ugu yaraan hal sano oo duulaya aan gacanta bidix u socdeen sida backstroker ah mid ka mid ah oo hubaysan oo aan halka aan sariirta ag jilba aan salaadda habeen ku yidhaahdeen. Ka dib markii weydiinaya Ilaah inay u duceeyaan Hooyo iyo Aabe iyo saddex walaalihiis ah iyo laba gabdhood oo dhan carruur gaajeysan ee China, Waxaan ka baryay u Boob, ka weyn walaashay Carol ee, kuwaas oo ahaa laba sano ka weyn iyo, Ilaah ka farxin, imaanaya hor walaashay toddoba iyo toban bilood yar Christine ayaa kor u tusay.
“Waa in aan, waa in aan, waa in aan kor ugu qaadno dhaceen,” Michael wuxuu igu ag dhan sannadahan dambe sida uu kor iyo hoos loogu shubaa Koraaya Up Skipper ee gacanta bidix. Naasaheeda u muuqday oo waayay in waqti kaamil ah si uu u heesa.
“Waxaa garaaca off,” Waxaan is-idhi. Waxaan u soo gaadhay, waayo, caruusada jir.
Michael iska qeebo iyada. “Yaa ka qeybiso iga dhig?”
“Iyada i sii,” Waan ku qeyliyay waxaan sidii aan dayday kabtanka. Caadooyinka Old dhiman adag oo dhan in, laakiin waxa ay ahayd run ahaantii la yaab leh habka Walaal Rag iyo Haween iyo waxaan ku noqon kara in ay naftooda carruurnimada our in nanosecond ah.
Jilif A weyn iga dhigay boodaan. Hooyo Teresa, Michael ee humongous St. Bernard, oo sidoo kale sii joogi ila ilaa Phoebe seegay ama iyada ilaa She'ool ay xanibeen ka badan, goolka Koraaya Up Skipper.
Waan ku qoslay.
Michael booday inuu cagihiisa. “Hooyo Teresa, waxaa hoos u dhaco.”
Hooyo Teresa qabtay Skipper ee gacanta bidix ilkaha dhexdooda iyada oo hurgufay iyada oo madaxa in qaar ka mid dhaqan ugaadh-dilay qadiimiga ah ayay uusan arrin ka baxsan waxaad fartaan. Laabta caruusada ayaa u muuqday oo la waayay la eegmo kasta.
Waxaan ku soo orday inuu jikada iyo goolka weel doggie dawayn ah. Anigu waxaan qabtay baxay buskut laf-qaabeeya ah.
Hooyo Teresa u muuqday in ay kor mid suni.
Waxaan gelin dawayn ugu horeysay ee dabaqa oo qaaday mid ka mid labaad ka Weelkii.
Waxayna siisay Koraaya Up Skipper, eegmo kale.
“Fine,” Waxaan is-idhi. “Laakiin digniin cadaalad ah, Waxaan barbaro line ee saddex.”
Hooyo Teresa kaalinta Koraaya Up Skipper si tartiib ah sagxadda iyo ururiyay iyada saddex kugula dhaqmo.
“Gabar Good,” Michael yiri.
“Taasi waa bareejo,” Waxaan is-idhi. Waxaan soo gaaray my caruusada shaqalaha-daboolan oo bilaabay iyada tirtira on jiinis aan. Waxaan dib oo goolka ku guntay oo pizza ah.
“Halkan, I heli doontaa in,” Michael yiri.
Waxaan ku wareejisay Koraaya Up Skipper iyo maradii xigsiin si hoos sariirtay.
Michael dhameysatay qurxinta Koraaya Up Skipper oo ahaa dib u rhythmically shubaya iyada gacanta bidix.
Waan ogaa waxa ay ahayd qaylo caawimaad. Waxaan aqoonsaday aan waajib walaalaha ah. Waxaan ka heli lahaa uu maskaxdaada ka koritaanka Skipper, markaas ayaan ku heli lahaa uu maskaxdaada ka Phoebe. I caawin lahaa isaga garasho uu guurka ahaa in ka badan oo isaga caawin u dhex maraan uu furiinka iyaga oo ku dadaalaya in ay sii Saameynta xun ee Annie iyo Lainie in ugu yaraan dhashay. Ka dibna waxaan u heli lahaa isaga ciyaar dheeraad ah oo ku haboon. Isla markii aan ka helnay in dhamaan afar gees iska, John Anderson iyo inaan fuulo lahaa off galay qorrax ka unbaana wada.
“Waxaan qabaa inaan u xirato doonaa in,” Michael yiri. “Ma waxaad doonaysaan inaan qaato Mother Teresa hal waqti dheeraad ah, ama aad iyada ka heli kartaa ka hor inta aadan madax off sariirta?”
Hooyo Teresa badan tiirsanaa oo calaacalahooda biyo ka leefleefay aan dhabanka. Waxaan ula taaheen. “Iyada waan kaa qaadi doonaa.”
Michael siiyey a half-ruxruxo murugo. “G'night, Sarah. Habeenka, Hooyo Teresa.”
Waxa uu ka qaaday tallaabo aan faraxsaneyn xagga qooladdii.
“Michael,” Waxaan is-idhi.
Waxa uu ku soo jeestay. Koritaanka Skipper waxaa gogollay cid gacmihiisa.
Anigu waxaan gacantayda ku qabtay baxay. “I sii lucbadda, Michael.”
Waxaan halkaasuu fadhiistay in muddo ah, xoqo Mother Teresa meesheeda cusub jecel, iyada dhegta bidix midig ka dambeeya. Markaas ayaan kacay oo tiptoed in aan jiifka hore ee sayidkiisa, taas oo aan lahaa beddelmi xafiis iyo halka aan ka shaqaynaysay mashruucyo iyo kaydiyaa wax dheeraad ah oo aan fasalka.
Waxaan rummaged marayo raso of scrapbooks on shelf hoose. Waxaan ka baxeen iga album arooska, waxaa ilmadii iska hal gacan, waxaa lagu qabtay daqiiqad qudha tahay. Indhahaygii baan xidhay oo la isku dayay in uu sawirtaa in Kevin, ninkayga hore. Dhamaan waxaan maskaxda ku wayday image a waadax ahayn nin ku fadhiyo kursiga musqusha ah, madaxiisa qarsoon ka dambeeya wargeyska, surwaal uu hareeraha anqowyadiisiiba, albaabka musqusha furan. Waxaan la yaabay, haddii Kevin news uu saaka ka akhriso on iPad ah hadda.
Ugu dambeyntii, Waxaan helay buuga lahaa waxaan hayaa intii aan maraan waxaa goobta shukaansi ah. Bogga A kasta oo timir my, qiimeeyo Xiddigaha-gacmeed iyo Calamada. Calamada casaanka Sidaas badan billowed guud ahaan dushooda pages in ay u muuqatay iib ah ee shirkadda xaraashka baabuurta si. George ka Hanover, oo raadinayay xiriir hal maalin bil ah, Xariga no, ballanqaadyada no. Waxaan noqon lahaa, oo ku koray uu atarka alfalfa gaar ah. Nin ayaa raadinaya Haweenay lagu daray yimaa-a, oo aan ku lahaa si kooban qayb ahaan tixgelin waayo waxaan jeclaa sida uu xarafka Haweenay, laakiin inta badan sababtoo ah waxaan cuni kari badan oo. Ray Santia, ku dhawaad ​​xiddiga ugu xeegada hore waxaan jeclaan ku dhawaad ​​dhintay oo la seexday. Bob Connor, Aabihiis ardayga in aanan la seexday.
Waxa ay ahayd meel Keyn ah, waxaa loo. Poor Michael. Laakiin haddii aan ma heli isaga baxay gurigayga iyo jidka uu ku faraxsan yahay, ka hor inta aan ogayn ayaan dib waxaa laga yaabaa in halkaas naftayda.
Xilli yar oo aan qaaday in ay gariiraan fikraddan. Kadib waxaan ogaadey ad ugu shakhsi walaashiis Carol aan Qudus ii, duubay galay xarunta of bog.
Isle, sensuous, qurxiya oo xiiso leh. Loo Doortay 40 DWF ay raadinayaan nin u gaarka ah si ay u wadaagaan habeen starlit. Waa jecel eeyaha.
Waxaan ka soo saaray inay qolka fadhiga qaadeen xusuus qor shukaansi aan, oo ay la socoto aan qalin jecel yahay casaan. Markaasaan u soo jeestay in ay bog cusub line-upkoodii ay college iyo taabtay tirtire ka soo horjeeda ilkahayga halka aan awood fulineed ad si ay ugu dhigmaan walaalkay.
Buff, cajiib ah, jabay laakiin ma dayactir ka baxsan. Doonteen ugu dhaqsaha badan in loo DWM la timaha oo dhan oo raadinaya qof dumar gaar ah oo la kulmay gabdhihiisii’ heerka sare ee. Waa jecel eeyaha slobbery weyn.
(Waxaa lagu daabacay iyadoo fasax laga buugga ugu dambeeyey Claire Shiil ee 'Waa Jacaylka Dogs – Xadhig New On Life’ – buug 2 ee lagu iibiyo ugu wanaagsan Waa Jacaylka taxane Dogs. Waxaad ka heli karaa war dheeraad ah oo ku saabsan Claire iyo buugaagta iyada www.clairecook.com)